» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २७
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २७
६ श्रावण २०७७, मंगलवार १३:१६
चन्द्र घलान,मकवानपुर, ६ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को काठमाडौँ अडिसनबाट ३५ जना प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । उनीहरुमध्ये २२ जनाका बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा चर्चा गरिसकेका छौँ । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिन तयार पारिएको भिडियो सिरिजको यो २७ औँ भाग हो । यस भागमा काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका थप ७ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा सञ्जय राना मगर, मुना ठटाल, सगुन लिम्बु, दामोदर बस्नेत, अंकित लुईटेल, श्रवणकुमार अधिकारी र लक्ष्मण लिम्बुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
२३) सञ्जय राना मगर–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका तेईसौँ प्रतियोगी हुन् सञ्जय राना मगर । धादिङमा जन्मिएका सञ्जय अहिले बाफलमा बस्छन् । उनी विभिन्न सांगितिक प्रस्तुतिहरुमा पनि व्यस्त छन् । उनले अडिसनमा ‘कहाँ कहाँ दुख्छ प्रिय’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतबाटै निर्णायकहरुको मन जित्न सफल भएका सञ्जयको निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । उनी दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् ।
२४) मुना ठटाल–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएकी चौबिसौँ प्रतियोगी हुन् मुना ठटाल । मुना सरगमका नामले परिचित मुनाले केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । उनी विभिन्न साँगितिक कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागी हुने गर्छिन् । उनले अडिसनमा ‘झझल्को लिएर आएछ सावन’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । सोही गीतबाटै निर्णायकहरुको मन जितेकी मुना दोस्रो राउण्डमा प्रवेश गरेकी छिन् ।
२५) सगुन लिम्बु–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका पच्चिसौँ प्रतियोगी हुन् सगुन लिम्बु । विभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउने सगुनका केही अफिसियल गीतहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनी आफ्ना कभर तथा मासप गीतहरुका कारण पनि चर्चामा छन् । उनले अडिसनमा ‘मैले पूण्य मन पराएँ’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतबाटै उनलाई निर्णायकहरुले दोस्रो राउण्डका लागि छनौट गरेका हुन् ।
२६) दामोदर बस्नेत–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका छब्बिसौँ प्रतियोगी हुन् दामोदर बस्नेत । दाङ निवासी दामोदर अहिले ईमाडोलमा बस्छन् । उनी अध्ययनका साथै सहकारीमा पनि कार्यरत छन् । उनले अडिसनमा ‘कसको माया’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतपछि उनलाई निर्णायकहरुले दोस्रो गीत गाउन लगाएका थिए । उनले दोस्रो पटक ‘भुल्न खोजेर पनि’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
२७) अंकित लुईटेल–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका सत्ताईसौँ प्रतियोगी हुन् अंकित लुईटेल । उनले यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । संगीत क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेका उनले अडिसनमा ‘बादल बनाईदेऊ’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकहरुलाई प्रभावित पार्न नसकेता पनि अंकितले दोस्रो पटक ‘सुन्दरताको तिमी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
२८) श्रवणकुमार अधिकारी–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका अठ्ठाईसौँ प्रतियोगी हुन् श्रवणकुमार अधिकारी । पोखराका श्रवण हाल थसिखेलमा बस्छन् । ललितकला क्याम्पसबाट संगीत विषयमा अध्ययन गरेका श्रवणले सानैदेखि गायन यात्रा सुरु गरेका हुन् । श्रवण रक गीत गाउन रुचाउँछन् । जीवनका दौडको दौडान कयौँ पटक हरेश खाएका श्रवण धेरै पटक परिवारको साथ सम्झेर जुर्मुराएर उठेका छन् । उनले यस अघि द भ्वाईस अफ नेपालको सिजन २ मा ब्याटल राउण्डसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले अडिसनमा ‘सम्झिने मुटु’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘हजार सपनाहरुको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
२९) लक्ष्मण लिम्बु–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका उनान्तिसौँ प्रतियोगी हुन् लक्ष्मण लिम्बु । संगीत क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागेका लक्ष्मणले आफ्नो अफिसियल गीतहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनी गायक, संगीतकार तथा गीतकार रुपमा पनि परिचित छन् । उनका केही केही गीतहरु चर्चित बनेका छन् । उनले अडिसनमा ‘बाला जोवन’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘तर मन बुढो भएन’ बोलको गीत गाएका थिए । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।